Majliisni Naannoo Hararii dhimmoota haala yeroo irratti kutaa hawaasaa adda addaa waliin mari'ate - NuuralHudaa
Majliisni Naannoo Hararii dhimmoota haala yeroo irratti kutaa hawaasaa adda addaa waliin mari’ate
Last updated Aug 26, 2018 19
Marii kana irratti Daa’iiwwan, Manguddoonni, Abbootiin Gadaa, Qeerroowwan fi qaamonni mootummaa naannichaa kan hirmaatan tahuun beekameera.
Mariin kun Prezdantii mana marii dhimmoota Islaamaa naannoo Hararii Sheikh Muhammad Amiin fi Sab qunnamtii mana marii dhimmoota Islaamaa Haaj Tawufiiq Abdallaahtiin hogganame. Dhimma nageenyaa ilaalchisee gocha seeraan alaa magaalota naannoo Oromiyaa fi Hararii keessatti maqaa Qeerroo da’oo godhatuun raawwatamaa jiru dhaabsisuu fi namoota gocha kana raawwatan mootummaa waliin tahuun seeraaf dhiheessuuf kan walii galan tahuun beekameera.
Prezdaantiin mana marii dhimmoota Islaamaa naannichaa Sheikh Muhammad Amiin fi itti gaafatamaa sab qunnamtii mana marichaa kan tahan Haaj Tawufiiq Abdallaah hawaasni muslimaa akkuma duraanii nageenya naannichaa jabeessee akka eeguu fi qaamota gocha seeraan alaa irratti bobba’anii nageenya hawasaa booressan seeraaf akka dhiheessu dhaamsa dabarsanii jiru.
HararMajliisa Naannoo Hararii
May 19, 2022 sa;aa 5:26 pm Update tahe